UV germicidal mwenje Vagadziri uye Vatengesi | China UV germicidal mwenje Fekitori
UV germicidal mwenje
Chipatara chakabata ruoko ...
Dhizaini nyowani 35W UV disinfect ...
36W Germicidal uv mwenje dis ...
36W Inotakurika 254nm Ozone uv ...
Inotakurika germicidal ultraviolet mwenje ozone sterilization mwenje
Ultraviolet ozone sterilization mwenje ine 253.7nm UV inogona kubvisa hutachiona (Covid-19) ipapo ipapo, inogona zvakare kubvisa mabhakitiriya uye mite, yakachengeteka uye iri nyore, inounza hupenyu hune hutano kwauri.
35W UVC Ozone Ultraviolet Germicidal Lamp Quartz Mwenje
Isu Kanfur tinoita marambi eUVC ehutsanana makamuri makuru, makamuri madiki, uye nzvimbo. Rarama hupenyu nehutsanana kudzora. Germicidal UVC zvigadzirwa zvevanhu nemabhizinesi zvakafanana.
Chipatara disinfection Ultraviolet germicidal mwenje
36W / 60W UVC mwenje Ozone ine kure kure kudzora kubva kuKanfur inogona kuuraya mabhakitiriya, hutachiona, mite, inogona kusangana nezvinodiwa zvekubvisa uye kutapudza hutachiona muhupenyu hwezuva nezuva uye kuchengetedza hutano hwako iwe nemhuri yako.
36W / 60W UV disinfection mwenje neisina waya kure kutonga
110 V / 220 UV disinfection mwenje isina waya kure kudzora kuburikidza nemadziro, yechitatu giya nguva, 15 masekondi kunonoka kutanga kudzivirira muviri wako. UV ozone disinfection mwenje, zvese-kutenderera kubereka, chengeta kure nehutachiona uye hutachiona.
ultraviolet sterilizing mwenje yemukati disinfection
Ultraviolet sterilizing mwenje inogona kubvisa mabhakitiriya, hutachiona uye mite, anoshandiswa zvakanyanya muKumba, Chikoro, chipatara, Hotera, iyo inoita basa rakakosha mukuuraya hutachiona muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
36W Inotakurika 254nm Ozone uvc disinfection mwenje
UVC disinfection mwenje inobatsira kuuraya mabhakitiriya, mavairasi, allergener, uye kuumbwa zvakanaka. Iyo kemikari isina hutsanana nzira iyo inouraya hutachiona mu360 ° kubatsira kugadzira nharaunda yekugara yakachengeteka nyore.
36W Germicidal uv mwenje utachiona mumba
110V / 220V germicidal uv mwenje kubva kuKanfur rega zuva ripinde mumba, nemabasa ekudzivirira hutachiona, kutapudza uye mite kubvisa, inounza iwe nharaunda ine hutano yekugara.
Dhizaini nyowani 35W UV disinfection mwenje wekunze sterilization
Isu Kanfur takangogadzira nyowani 35w UV disinfection mwenje, ine Aluminium alloy bracket, ABS shell, UV uye ozone kaviri sterilization, gadzira imba yakanaka nharaunda.
Chipatara chakachengetwa chinotakurika ultraviolet disinfection mwenje
35W inotakurika UV sterilizing mwenje, Inesimba UV uye Ozone inosangana kune
chengetedza mweya nepamusoro mukati mekamuri pamba kana munzvimbo yebasa.
Hunhu hwekutanga, kuvimbika kutanga
Room 102, Quanshan Mining Science Park, Xuzhou guta, Jiangsu dunhu, China 221000